Inyaniso entsha ye-COVID Xa undiza e-US yiminyaka engama-20 kwiNtolongo yase-Federal yokuThimba okanye ukophula iMask.
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Inyaniso entsha ye-COVID Xa undiza e-US yiminyaka engama-20 kwiNtolongo yase-Federal yokuThimba okanye ukophula iMask.
Airlines • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IINKCUKACHA-19 Delta ezahlukeneyo - Vala iMelika eMelika!
Ngokwe-FAA, iingxelo zabakhweli ezingama-4,385 3,199 ezingalawulekiyo zafakwa kwisithuba sonyaka eUnited States. Kule nto, i-20 ziingxelo zezehlo ezinxulumene nemaski. Ukuphazamisa abasebenzi beenqwelo-moya lulwaphulo-mthetho olunobuzaza, kodwa ngaba kufanelekile ukuba lulwaphulo-mthetho phantsi komthetho iPatriot Act iminyaka engama-XNUMX entolongweni? Umongameli wase-US osekela amalungelo amaFlyers uPaul Hudson akacingi njalo.
Libala umgama ekuhlaleni xa ukhwela inqwelomoya ekhaya eMelika.
Abagibeli abachasayo kwimimiselo yangoku kunye nokumemeza ngelixa behamba ngeenqwelo-moya bangatshutshiswa phantsi kwe-Partriot Act ejongene neminyaka engama-20 entolongweni.
Abasebenzi beenqwelomoya e-US baqeqeshwa ngabantu abafanayo abaqeqesha oonogada basejele- hayi iinzame zokuphuma.
Isibhakabhaka esinobuhlobo eUnited States asinakho kwaphela ukuba sibe nobuhlobo njengoko babenjalo kumaxesha amandulo ePAN AM.
I-Federal Air Marshals ifundisa abagadi beenqwelomoya ukuba bajongane njani nomngcipheko okhulayo wabakhweli abathanda ukulwa nabanogonyamelo, bahlala ngaphezulu kwemithetho yobuso.
Izithintelo ezidla ngokunyanzeliswa kwiinqwelomoya, kubandakanya izihlalo eziphakathi ezivulekileyo, intlalontle yokuhamba ngenqwelomoya, kunye nemithetho yokugonya, ayisoloko isebenza kwiinqwelomoya zaseMelika.
Abakhweli abaninzi basekhaya eMelika bayala ukulandela imigaqo yokunxiba iimaski ngenxa yezopolitiko, inkolo, kunye nezinye ngenxa yezizathu zempilo. Oku kubangela inani elikhulu leziganeko, ezichazwe kwi-Federal Aviation Authority (FAA)
Ukubhabha kubudala be-COVID-19 kuxinzelelo kubakhweli kunye nabasebenzi, kwaye kukhokelele kwiziganeko ezinxulumene nemaski ezingama-3,199 ezichazwe kwi-FAA. Ukujonga kuphela i-4,385 yeengxelo zabakhweli ezingalawulekiyo ezifayilisiweyo ngonyaka, eli linani eliphezulu kakhulu.
Ukufumana abakhweli phantsi kolawulo, kuxoxwe ngako eNdlwini ukohlwaya izehlo ezinxulumene nabakhweli kubukrakra obufanayo bokuxhwila. Umthetho wePatriot wabekwa eUnited States ukuphendula uhlaselo lobunqolobi, hayi ukuphendula umgibeli okhalazayo. Ukophula umthetho wePatriot kuza nesigwebo seminyaka engama-20.
UPaul Hudson, uMongameli we Amalungelo amaFlaya, ibinguye Ummeli othetha phandle yamalungelo abakhweli kwaye athi kwanele.
Amagqabantshintshi abhalwe nguFlyersRights.org kwiKomitana yeNdlu yeeNdawo zokuHamba ngokwanda kwenani leziganeko zeenqwelo moya
Ukwanda kwangoko kweziganeko zobundlobongela kuhambo lomoya ngumba obaluleke kakhulu odinga izisombululo. Ukumamela ikomitana kuya kuxhamla ngokuva umbono womkhweli. IFlyersRights.org ingenise isikhalazo sokwenza umgaqo kwiSebe lezoThutho ngeyeThupha ka-2020 yokuyalela ukuba kunxitywe iimaski kuhambo lomoya. IFlyersRights.org ibe ngumbutho ophambili othethelela amanyathelo okuthomalalisa i-COVID ukwenza ukuhamba komoya kukhuseleke.
Ngokwedatha yakutshanje ye-FAA, iziganeko ezinxulumene nemaski zixela i-73% yazo zonke izehlo ezichazwe ngabasebenzi ngo-2021. uphando. IFlyersRights.org iphakamisa ezi zisombululo zilandelayo ukunciphisa inani lokuphazamiseka okunxulumene nemaski kwiinqwelomoya:
Sebenzisa inkqubo yamakhadi etyheli apho umgibeli anikwe isilumkiso esibhaliweyo kunye nokukwazi ukuthumela isikhalazo esibhaliweyo kumqhubi wenqwelomoya okanye kwinqwelomoya njengenyathelo lokwehla kwezinga.
Qinisekisa ukuba abagcini beenqwelomoya ngokwabo bayayithobela kwaye bayayinyanzelisa ngakumbi imigaqo yemaski.
Vumela ukukhululeka okukhulu kokufumana impilo esemthethweni kunye nokukhubazeka ngaphandle kolawulo lwemaski.
Sebenzisa imilinganiselo yokunciphisa ye-COVID, kubandakanya ukuhlengahlengiswa kwentlalo kunye nokuhlolwa kobushushu. Ukuphambuka kwezentlalo kufuneka kunyanzeliswe kungekuphela kwinqwelomoya, kodwa esangweni, ngexesha lokubhoda, nakwiindawo zokujonga ukhuseleko.
Phinda uvavanye ukwandiswa kwegunya le-TSA ngesaziso sikawonke-wonke kunye nenkqubo yokuphawula.
Iinqwelo-moya ziye zanyanzelisa abakhweli kwinani elincinci leenqwelomoya ngaphandle kokuphambuka ekuhlaleni, akukho sihlalo siphakathi, akukho mida yamandla, akukho kuhlolwa kobushushu, kwaye akukho vavanyo lwe-COVID. Ngelixa abanye abakhweli bephikisa iimaski ngenxa yezizathu zopolitiko, abanye babona ukunqongophala kweminye imiqathango yokhuseleko oluqhelekileyo ethathwa ziinqwelomoya (indawo yokuhamba ibanga ekuhlaleni, ukuvimba izihlalo eziphakathi, ukujonga ubushushu) kunye nokusilela kokunyanzeliswa okungagungqiyo kubagibeli kunye nabalindi beenqwelomoya.
Ukutshutshiswa kwebhetri kuyafuneka xa ezi zigameko zinobundlobongela. Nangona kunjalo, iya kuba kukunyuka okunyanzelekileyo kunye nokwaphulwa okunzulu kwenkululeko yoluntu ukubhengeza umthetho wobuzwilakhe we-Patriot Act "uphazamiso lwabasebenzi beenqwelomoya kunye nabahambi ngenqwelomoya" eyenzelwe abaxhakamfuli kunye nokusongela umgibeli ukuya kuthi ga kwi-20 iminyaka entolongweni.
IFlyersRights.org ikhuthaze umthetho wemaski kunye namanye amanyathelo ezempilo ukukhusela abakhweli kunye namalungu abasebenzi. Ngelixa uninzi lwabalindi beenqwelomoya lunyanzelisa umgaqo wemaski kangangoko banakho phantsi kweemeko, uninzi lwabalindi beenqwelomoya abazami ukunyanzelisa kwaye ngokwabo bophula umthetho wemaski.
IFlyersRights.org ayizukuchaza ukuba zincinci izinto ezenziwa liqela labalindi beenqwelomoya kwiqela liphela. Nangona kunjalo, nanjengoko kunyanzeliswa ukuba kuthathwe inyathelo ngokuchasene nabakhweli abalayo ukwambatha imaski, kufuneka kuthathwe inyathelo nxamnye nabahambi ngenqwelomoya abaphula umthetho wemaski okanye abangenzi nzame zokunyanzelisa umthetho. Ayizukunceda nje kuphela ukuthintela uninzi lweziganeko ezenyanyekayo zabakhweli, kodwa ikwabalulekile kwimpilo eqhubekayo yabo bonke abakhweli kunye nabasebenzi beenqwelo moya kulo lonke ubhubhane.